ရောင်းရန်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်,lievstock feed ကိုတောင့်စက်စက် featured
တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များပြုလုပ်ရန်အထူးထုတ်လုပ်ထားသောလုံးလေးများကြိတ်စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်, duck, ကြက်နှင့်အခြားကြက်ဘဲ. ဒီအစာတောင့်စက်ယန္တရားလက်စွပ်သေဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်သည်. သငျသညျအလတ်စားမှအကြီးစားအစာကျွေးလုံးလေးများလုပ်လိုလျှင်, ကျွေးသောအစာတောင့်ကြိတ်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက် ကြက်သားမွေးမြူသူများကကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်, ယုန်, နွားမ, သိုး, တိရစ္ဆာန်များ, ဝက်, နောက် ... ပြီးတော့. အစာတောင့်များပြုလုပ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာတောင့်တောင့်များသည်မွေးမြူရေးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာဟာရအမျိုးမျိုးကိုမျှတစွာပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ကြက်နှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များ.
ဤတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်အတွက်ကုန်ကြမ်းများသည်ပြောင်း / ပြောင်းဖြစ်နိုင်သည်, ကျောက်စိမ်း, ဂျုံဖွဲ, မြက်ပင်, ဆန်, ပဲ, ရေနံကိတ်မုန့်, စသည်တို့. အများအားဖြင့်, ကြီးမားသောအရွယ်အစားကုန်ကြမ်းများကိုထုထည်ဖြင့်ကြိတ်ခွဲရမည်. ပရိုတိန်းသို့မဟုတ်အခြားအာဟာရများကိုလည်းအမှုန့်ကုန်ကြမ်းထဲသို့ထည့်နိုင်သည်.
* တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်အစိုင်အခဲအမျိုးမျိုးကိုကျွဲနွားကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အစာတောင့်ငယ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်သင့်လျော်သည်, နွားမ, ကြက်သား, ယုန်, ဝက်, စသည်တို့.
Aniaml Feed Pellet Mill အင်္ဂါရပ်များ
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းတယ်: တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်လူများစွာကိုလည်ပတ်ရန်မလိုအပ်ပါ. တကယ်တော့, တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်၎င်းကိုလည်ပတ်ရန်လူတစ် ဦး နှစ် ဦး သာလိုအပ်သည်. ဤသည်ကထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာလျော့ကျစေသည်. ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နိမ့်ခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းတိုးပွားစေသည်.
တပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချ: တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသေးငယ်သောကြောင့်၎င်းကို ၀ ယ်ယူတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုစုစည်းရန်သင်မိနစ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်. ၎င်းသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများကိုခေါ်ယူရန်လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုလျော့နည်းစေသည်. သူ့ကိုကူညီရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်အခြားတစ် ဦး သာလိုအပ်သည်.
ဒါဟာအနိမ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစက်ပါပဲ: ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့်, တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်smallရိယာအနည်းငယ်လိုအပ်သည်. ၎င်းသည်ကြီးမားသောiringရိယာငှားရမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောအချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်.
ကျယ်ပြန့် application ကိုရှိပါတယ်: တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်မတူကွဲပြားသောကြက်၊ ဘဲမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးကိုစက်တစ်ခုတည်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းကျွေးမွေးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်. ၎င်းသည်လယ်သမားများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လယ်ယာမြေများတွင်တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကိုမွေးမြူရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်.
အသေးစားလုံးလေး Mills ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter